कसरी कम्प्युटर (Windows 7) एक माइक्रोफोन जडान गर्न "स्काइप गरेको" कराओके
इन्टरनेट प्रविधि र वैश्विक नेटवर्क को संचार सम्भावनाहरू विकास अत्यन्तै विविध छन्। तैपनि, सबै भन्दा त बोल्न बानी र, संचार को परम्परागत फारम अझै पनि जानकारी मौखिक विनिमय रहनेछ। कारण एक माइक्रोफोन जस्ता इलेक्ट्रोअकउस्टिक उपकरणमा, मान्छे यो चन्द्र को विपरीत पक्षमा छ भने पनि, सुने गरिनेछ। पाठ्यक्रम Exaggerating, तर अर्थ स्पष्ट छ। भने ट्रांसड्यूसर तिनीहरूलाई वरिपरिको विश्व मा प्रभाव को एक महत्वपूर्ण तत्व हो। यो पीसी प्रयोगकर्ता बारेमा ज्ञान छ लागि यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ कसरी कल्पना गर्न सजिलो छ कसरी कम्प्युटरमा एक माइक्रोफोन जडान गर्न यो एक स्काइप-भिडियो स्थापना वा कराओके अनुकूलन गर्न आवश्यक छ जब, - (कुरा छैन Windows7मा स्थापित, वा एक फरक संस्करण)। सायद तपाईं पनि विद्युतीय समस्या यस प्रकारको सामना केही अफ्ठ्यारो अनुभव गर्दैछौं। यदि हो, त तपाईं बस निर्देशन यन्त्र स्थापित इलेक्ट्रो को सही सञ्चालन आनन्द तपाईं सफ्टवेयर समस्या निर्मूल गर्न मद्दत गर्नेछ जो र यो लेख पढ्न आवश्यक छ।
यी विभिन्न माइक्रोफोन: केवल लागि आनन्द र उदाहरणका लागि,
सामान्यतया, (उपकरण गरेको पिकअप सहित) एक प्रयोगकर्ता खरिद थप उपकरण कम्प्युटर स्टोर मा जहाँ विक्रेता सधैं तपाईं एक विशेष उद्देश्यका लागि किन्न आवश्यक मोडेल कस्तो बताउनुहोस्। तपाईं यसलाई किनेको छ भने, तपाईं, यो तपाईं के आवश्यक छ छैन, वा तपाईं दिनुभयो उपकरण अस्पष्ट कनेक्टर stipulates (एक विकल्प, यो तपाईं पुस्तामा मार्फत, गर्न, त्यसैले बोल्न पायो छ - दिग्गज लेखिएको संग: "को सोभियत संघ मा बनाएको") लाग्छ, यो एकदम यो प्रश्नको जवाफ एक समाधान खोज्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ भन्ने संभावना छ: "कसरी म आफ्नो कम्प्युटर» विन्डोज7अपरेटिङ सिस्टम यो जानिन्छ एक माइक्रोफोन जडान गर्छन्, आधुनिक कम्प्युटिङ उपकरणहरूमा स्थापित छ। उत्तरार्द्ध परिस्थितिमा एक अपेक्षाकृत नयाँ इन्टरफेस स्तर को प्रयोग पनि समावेश छ। त्यसैले, "vtyknut nevtykaemoe" (हामीलाई यस्तो हास्यास्पद Pun मा पाठक क्षमा) तपाईं प्राप्त छैन। तर कुनै एक यो सिद्धान्त मा सम्भव छैन भनेर भन्छन्। आखिर, यो लगभग कुनै पनि कनेक्टर यस्तो बाह्य मिक्सर वा एम्पलीफायर रूपमा विभिन्न एडेप्टर र अतिरिक्त उपकरण, को प्रयोग समावेश कुनै गोप्य छ। तथापि, का एक सरल जडान विकल्पहरू लागि बन्द गरौं।
अडियो कनेक्टरों Assigning, वा तार कहाँ छन्?
यसलाई केही मानिसहरू "audioapgreyda" को प्रक्रिया छन् भनेर टिप्पण लायक छ प्रश्न हुन सक्छ "कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा एक माइक्रोफोन जडान गर्न»: Windows7का पिकअप एनालग प्रकार उपकरणहरूमा कार्य गर्दछ। सामान्यतया, जब तपाईं एक पारंपरिक USB-हेडसेट जडान, प्रणाली स्वचालित रूपमा आवश्यक चालक क्रियाशीलता। प्रयोगकर्ता मात्र विशिष्ट सफ्टवेयर चलाउन र थप परिचालन प्रक्रियाहरू आनन्द उठाउन सक्छौं। तर, सबै साईट प्रयोगकर्ता जो पोर्ट यो एक माइक्रोफोन जडान गर्नुपर्छ थाहा। सायद, तपाईं, प्रिय पाठक, तपाईं निम्न जानकारी आवश्यक:
आधारभूत अडियो जैक को स्थिर एकाइ पछि स्थित छन्;
नियम, माइक्रोफोन इनपुट गुलाबी मा रंग छ;
को रियर-प्यानल इन्टरफेस को भाग आफ्नो पहिचान को सार प्रतिनिधित्व जो ग्राफिकल प्रतीक, संग प्रदान गरिएको छ।
त्यसैले, तपाईं आतंक अघि, तपाईं निश्चित actuated ज्याक फिट उद्देश्यको लागि बनाउन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, सबै कुरा एकदम सरल छ।
स्काइप बिना गर्न सक्छन् जब: कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा एक माइक्रोफोन जडान गर्न
Windows7"स्काइप" - एक उपयुक्त प्रणाली छ। तर, कार्यात्मक आत्म-sufficiency "सातौं" ओएस सफ्टवेयर बावजुद अझै पनि कहिलेकाहीं संघर्ष आउँदैन। अक्सर यो अडियो चालक प्रणाली, अनुगमन र माइक्रोफोन को सञ्चालन नियन्त्रण जो बीच inconsistency कारण हो। केही embodiments मा, जानिन्छ उपकरण तपाईं जटिल हार्डवेयर भराई प्रयोग; बिना मूल (ब्रांडेड) यस्तो अवस्थामा सफ्टवेयर बस गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं माइक्रोफोन देखि स्थापना सीडी छ भने, तपाईं इन्टरनेटमा आफ्नो आफ्नै चालक फेला पार्न गर्नुपर्छ।
हामी सिस्टम हामी अडियो उपकरण देखेर रुचि हो कि हेर्न
त्यसैले, कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा एक माइक्रोफोन जडान गर्न? "Windows7परम" (साथै "सातौं" ओएस को कुनै पनि अन्य संस्करण) मानक उपकरण को सीमा छ, राम्ररी संगठित र त्यहाँ हामी छलफल गर्दै प्रश्न जवाफ छ को संलग्नता।
पहिलो, तपाईंले सही इलेक्ट्रो-ध्वनिक उपकरणहरू जडान कि छ जाँच गर्नुहोस्।
नियन्त्रण प्यानल जाने र "" अडियो खण्डमा जानुहोस्।
अर्को, ट्याब "रेकर्ड" सक्रिय।
तपाईं एक माइक्रोफोन को रूप मा प्रतिमा फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि सेवा सञ्झ्यालको काम क्षेत्र को खाली क्षेत्र दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्।
सन्दर्भ मेनुबाट, "देखाउनुहोस् असक्षम उपकरणहरू" चयन गर्नुहोस्।
यस फेरि ड्रप-डाउन सूची कल नै प्रमुख दायाँ हात को माध्यम द्वारा प्रतिमा मा मार्कर र प्रकट कदम पछि।
अब "गुण" विकल्प क्लिक गर्नुहोस् र "स्तर" ट्याबमा जानुहोस्।
सायद, तपाईं उकालो ध्वनि को Sliders तान्नुहोस् पछि, कम्प्युटर एक माइक्रोफोन जडान गर्न को प्रश्न (Windows 7) एजेन्डा हटाइने।
मामला अध्ययन: लोकप्रिय videomessendzhera को अनुकूलन आवाज कार्यक्षमता
प्रारम्भिक आवेदन प्रक्षेपण पछि स्काइप तपाईंले केही अडियो र भिडियो सेटिङहरू माग्छ:
कुनै पनि वाक्यांश बोल्न र संकेत सूचक पनि काम सञ्झ्यालको उपयुक्त खण्डमा जवाफ कि याद गर्नुहोस्।
- छैन भने, निश्चित चेक बक्स ठीक निर्दिष्ट के तपाईं जडित जो छन् माइक्रोफोन, को नाम।
परीक्षण कल र प्रयोग यन्त्र परीक्षण।
एक माइक्रोफोन कसरी स्थापित गर्न को Realtek HD अडियो व्यवस्थापकमा
मेनु "कन्ट्रोल प्यानल" मा एउटै नाम खण्ड को प्रतिमा चयन गर्नुहोस्।
एक पटक तपाईंको आवाज नियन्त्रक को मुख्य सञ्झ्यालमा आफैलाई फेला पार्न, माथिल्लो भाग मा स्थित फारममा माइक्रोफोन प्रतिमा सक्रिय।
यो ध्वनि कार्ड इन्टरफेस विभिन्न संस्करणहरू मा नियन्त्रण को अलि फरक व्यवस्था हुन सक्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
को "रातोआँखान्यूनीकरण" र "इको" चयन गर्नुहोस्।
स्वीकार्य स्तरमा माथिको रेकर्ड मात्रा स्लाइडर गर्नुहोस्।
आवश्यक छ भने, तपाईं transducer को लाभ प्यारामिटर, एक तीन मानहरू उचित जाँच बाकस संकेत, decibels मा व्यक्त वृद्धि।
अब तपाईं कसरी कम्प्युटरमा एक माइक्रोफोन जडान गर्ने केही तरिका (Windows 7) थाहा छ। कराओके, खैर, पनि माथि उल्लिखित नियन्त्रक प्रयोग कन्फिगर गर्न सकिँदैन। फारममा उपयुक्त ट्याब वा प्रतिमा हामी एक इलेक्ट्रो-ध्वनिक साधन छलफल गर्दै फेला पार्न र उपकरणको सञ्चालन मा आवश्यक परिवर्तन।
साईट प्रयोगकर्ता कहिलेकाहीं प्रणाली एकाइ सबैभन्दा सुलभ स्थानमा नक्कल तिनीहरूलाई केही, राखिएको अतिरिक्त connectors को एक नम्बर, छ, अक्सर सोध्न "कसरी म अगाडि प्यानल कम्प्युटर (Windows 7) एक माइक्रोफोन जडान गर्छन्?" वास्तवमा। यो जडान "ध्वनि प्रबन्धक" र एउटा प्रतिमा सक्रिय जान आवश्यक छ एक रेन्च को फारम (व्यवस्थापन इन्टरफेस को सही कम भाग), को "कनेक्टर सेटिङहरू" मा जानुहोस्। तपाईं उपयुक्त ध्वनि योजना सक्षम पछि, समस्या हल गरिनेछ। सबै भन्दा राम्रो!
कम्प्युटर Motherboard के हो?
सिस्टम एकाइ - यो के हो? उपकरण र सिस्टम एकाइ जडान को विशेषताहरु
Depressive neurosis: लक्षण र उपचार
प्यानकेकहरू प्रोटिन: सौन्दर्य को स्वास्थ्य र संरक्षण को लागि सबै भन्दा राम्रो व्यञ्जनहरु!
NVIDIA GeForce GTS 450: विशेषताहरु। भिडियो कार्ड NVIDIA GeForce GTS 450: चालक
पर्खाल loudspeakers: अवलोकन, प्रकार, सुविधा र समीक्षा
जहाँ नयाँ वर्षको सस्ती र राम्रो बाँकी जान?
मूल्याङ्कन के हो? दर्जाको फाइदा के हो?
सबै भन्दा लोकप्रिय चिकित्सा विद्यालय रूस
Drobysheva नीना: प्रसिद्ध अभिनेत्री को जीवनी
हितोपदेश महत्त्व: "साना व्यापार ठूलो idleness राम्रो छ।" किन यो महत्त्वपूर्ण व्यस्त हुन
बाल कार मा बह: के? सुझाव र चाल